Voamarina: Xiaomi dia hanolotra ny Xiaomi Mi Band 3 amin'ny 31 Mey | Androidsis
Ny hetsika izay nokarakarain'i Xiaomi amin'ity 31 Mey ity dia mampanantena hanome betsaka horesahina. Ny marika sinoa dia nanambara nandritra ny herinandro lasa izay ny sasany amin'ireo vokatra izay ho hitantsika ao. Ny fanolorana ny Xiaomi Mi 8 sy ny fahatongavan'i MIUI 10. Efa voamarina ihany koa. Ny vokatra iray hafa izay tsaho fa ho hitanay tamin'io hetsika io dia ny Xiaomi My Band 3. Voamarina ihany izany tamin'ny farany.
Izy io dia ny taranaka fahatelo amin'ny haba tanan'ny marika. Vokatra amidy amidy eny an-tsena ary dia nanampy ny marika sinoa hametraka ny tenany ho iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra Amin'ity sehatra ity. Fahombiazana antenain'izy ireo ny hiverenan'ity Xiaomi Mi Band 3 ity.
Nandritra ny herinandro maro dia noeritreretina fa ny marika dia hanolotra ny fehin-tanana vaovao amin'ny hetsika amin'ity hetsika ity. Na dia tsy nisy nanamarina aza hatreto. Farany, ny filoha lefitry ny marika no niandraikitra ny fanamafisana ny vaovao.
Amin'izay mba amin'ity 31 Mey ity dia afaka miandry ny fampisehoana an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity ihany koa isika. Taranaka vaovao, antenaina fa tsy hanolotra fiovana be loatra amin'ny resaka endrika raha oharina amin'ny teo aloha. Na dia ny andrasana aza dia ny fisian'ny fiasa vaovao ao.
Ankoatra izany, Izahay dia efa manana ny afisy fampiroboroboana izay hitanao etsy amboniny. Ka ny fanombohana an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity dia efa ofisialy amin'ny lafiny rehetra. Raha ny momba ny pitsopitsony, tsy misy angona manokana navoaka, ka tsy misy zavatra fantatra momba izany.
Soa ihany, amin'ity alakamisy ity isika dia afaka mivoaka amin'ny fisalasalana ary mahafantatra ireo vokatra rehetra nomanin'i Xiaomi ho antsika amin'ity hetsika vaovao ity. Anisan'izany ny Xiaomi Mi Band 3, izay ho fahombiazana vaovao indray eo amin'ny tsena mitafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Band 3 dia haseho amin'ny 31 Mey